Gịnị bụ Giant TCX? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nnukwu tcx nyochaa - azịza dị mfe maka ajụjụ
Nnukwu tcx nyochaa - azịza dị mfe maka ajụjụ
Gịnị bụ Giant TCX?
Site na asọmpi World Cup mara mma na agbụrụ obodo na ogige ntụrụndụ,Nnukwu TCXOgologo oge abụrụla nhọrọ mmeri maka ndị na-agba ọsọ cyclocross nke ọkwa niile.NKWOmalitere ya dị ka okpokolo agba aluminom mepụtara naanị maka ndị agbụrụ. The mbụ 2003 etiti bụ mbụ nke ụwa 'cross bike na kọmpat jiometrị.
Ndewo m, taa, enwetara m nyocha igwe ọhụrụ m, obi dị m ezigbo ụtọ ịnwe igwe kwụ otu ebe a ugbu a. Nke ahụ bụ ibu tcx SLR ịgbakwunye ihe, o doro anya na ọ bụ site na a ibu, ọ bụ yiri n'ebe ahụ na ọ na-eresị na US maka $ 1600 na luckily m bi na Canada otú m bi? Enwetara m ya na 1,500, mana enwetakwara m ezigbo ahịa site na Gears Toronto. Ọ bụ ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe dị egwu na Toronto ma ọ bụrụ na ị bi ebe a zụta igwe kwụ otu ebe gị ebe a ka ọ ga-abụ nyocha ngwa ngwa Nkọwa nkọwa dị ka ị nwere ike ịhụ igwe kwụ otu ebe a nwere Giant's L-look SLR frame, nke dị elu karịa D na ọ ka mma qualitydị mma na ọkụ karịa Alex SL nke na-abịa na nnukwu Defi etiti ka ị wee hụ oh hụrụ SLR ebe ahụ ma n'ezie nke a bụ t CX -Model, ebe ahụ ị nwere ike ịhụ t CX ma enwere nkọwapụta ọbara ọbara dị oke mma. nile igwe kwụ otu ebe na nke a nwere otu Shimano 105 dị iche iche, ndị na-agbanwe agbanwe na ndị na-ere ahịa ị ga-ahụ na derailleur bụkwa Shimano 105 na onye na-azụ azụ na o doro anya na ewepụghị ihe mmado ahụ mana yabụ m ga-eme nke ahụ ugbu a.
Ọ bụ igwe ohuru ohuru nke dị n'ime igbe ma si ebe ọzọ kwaga ebe Toronto n'ihi ya anyị nọ ebe a na-agba ọsọ ma echere m na nke ahụ bụ ọsọ ọsọ iri echere m na echeghị m na m ga-enwe okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na m na-ezighi ezi m ga-eziga ya ebe a ma ị ga - ahụ na ọ nwere ngwa ngwa ịhapụ ya ọzọ enwere nkọwa zuru ezu ebe ahụ na TCX ebe ahụ na nnukwu na nke ahụ nwere tipi, TRP Spire Break anyị dị oke mma nke ukwuu ma eche m na ọ bụ 160 agbaji ma n'ezie nke a bụ igwe kwụ otu ebe na nke a nwere taya 32 na ya bụ Schwinn Schwab Oh Super Swan na rim bụ mgbidi mgbidi abụọ m amaghị ama m na ihu ihu ihu bụ FSA Omega Sie can lee n'aka nri ọ bụ Omega na nke ahụ bụ obere petals ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe nyere m na m ga-etinye Shimano 105 mkpagide pedal na igwe kwụ otu ebe n'oge na-adịghị anya dịka ị hụrụ na nke a nwere ezé 46 ruo 36, nke 46 ebe a na ebe 36 n'ime m na-eche na ị pụrụ ịhụ na abụba otu abụghị na azụ ma mara fatdown tube na ị pụrụ ịhụ nkọwa na ụkpụrụ n'okpuru na nke cou Ọ bụ ezie na nke a nwere nnukwu M1 nri n'ebe, onwe m na-amaghị na m na-amasị logo bụghị n'ezie, ma m wee gafee mmefu ego na ya igwe kwụ otu ebe. M jiri m tụnyere ihe nnukwu diff m meriri mana enweghị m ike ịnwale ya ka m wee were ya wee bịa na teepu aka na-acha ọcha nke m na-atụ anya ịgbanwe n'oge na-adịghị anya ma ị ga-ahụ na n'elu aka nri ebe a Oh SLR aluminum tech M hụrụ n'anya ụkpụrụ a n'ezie, ọ na-akawanye njọ na fatter na mma na ị pụrụ ịhụ na o nwere a carbon ndụdụ na carbon seatpost ma ị na-apụghị ịhụ na ị na-apụghị ịhụ carbon ụkpụrụ na a igwe kwụ otu ebe na o nwere na-acha ọcha sadulu na m n'ezie masịrị kpocha ya ọ dịlarị, nke ruru unyi, nke mere na ị nwere ike ịhụ, ọ bụ ezie na nke a dị ọhụụ ma n'ezie ị nwere ike ịhụ aka na-acha ọcha na n'ihi na nke a bụ Shimano 105 gbadoro USB na-abanye ebe a na Giant nwere nke dị n'ime Usoro ntanetị na-arụ ọrụ nke ọma dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, a na-eduga eriri niile ebe a na dịka ị pụrụ ịhụ na enwere obere nchekwa USB a na m eche mgbe ị gbanye ndụdụ ahụ eriri na-ezute etiti en na nke ahụ na-egbochi eriri USB imebi etiti ahụ mana nke ahụ bụ n'ezie, ọ bụrụ na ị reprint, ị n'ezie bumped na yo legskwụ gị na roba ahụ na-abịa n'ụzọ dị na ọ dị nnọọ njọ, mana ee, anyị nwere oghere karama mmiri abụọ ma ọ bụrụ na ị na-eche na nke a bụ akpa weedgie pụrụ iche ị ga-enweta nkọwa ndị ọzọ ebe ahụ wee cheta nke a ọ bụ ụlọ ọhụrụ m nke mere na ọ dị ezigbo unyi ebe a huda anyị na-aga ebe ahụ abụba taya dị ezigbo unyi m na-agakarị n'okporo ụzọ mana ị maara na m gbagoro igwe kwụ otu ebe. igwe kwụ otu ebe bụ nke bụ n'ezie obe n’agbata ugwu na ụzọ ihe.
Nkọwa ndị ọzọ ma ka anyị gaa n'akụkụ nke ọzọ, ebe a n'akụkụ nke ọzọ bụ Pre Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, mana ị nwere ike ilekwu anya na tcx logo na igwe kwụ otu ebe a. Ọ dị mma na-acha uhie uhie n'ime ya na ndụdụ a ọ na-acha ọbara ọbara n'ime na nke a bụ ndụdụ carbon na nke a bụ eriri maka breeki ihu na ọ naghị abanye. Eku ahụ kwere nghọta ma ebe a anyị leruru anya na TRP Spirebrakes .
Ha dị ezigbo mma, ha na-apịaji n'akụkụ abụọ dị ka ọtụtụ braki diski na-arụ ọrụ mgbe ha na-adọta n'otu akụkụ ma na-agbanye breeki na mpempe akwụkwọ ọzọ, mana nke a na-agagharị ma ị ga - ahụ mboanuohia ebe a, brek na - ejide nke ọma ma ọ na - eme mere mgbanwe site na igwe eletriki igwe eletriki igwe eletriki na breeki ndị a dị mfe maka m ma ị nwere ike ịhụ FSA Omega akara aka anyị ebe ahụ ma ị hụ gearbox, ọ bụ kọmpat na imewe a ebe a iji mee ka obi dịkwuo igwe kwụ otu ebe, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe a nke ọduọ igwe kwụ otu ebe karịa a igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ bụ ezie na ọ bụ acyclocross ọ bụ ihe a nke a ọduọ bike na-ebenata ụkpọ na na ọ bụ nnọọ ezigbo onye na n'ihi na imewe ya n'ezie lurches n'ihu nke ọma na m mara mma obi ụtọ na ọ nwere ọnọdụ ziri ezi karịa amishspecialize la that was a racing bike so I decided to buy this you can have more stickers see this is a small frame and it is really made in taiwan, ọ mere na taiwan n'ihi na ọ bụ nke ka elu Ọdịdị SLR dị mma kama igbe SL nke na-abịa na nnukwu nnupụisi ahụ ma enweghị m ohere ịnwale usoro Defy ziri ezi yabụ m kpebiri na m ga-eso ya na nke a bụ igwe kwụ otu ebe ka mma ị ga-ahụ 105 ebe ahụ site na igbanweghi nke oma dika nke juru aju ma nke a bu igwe mbu mbu nke m nwere nwere igwe ugbo ala ya mere m na-ele anya ime ma obu ide ya ebe a na toronto abughi ndi mmadu eweputara na otutu ha di ebe a. na ee, n'ụzọ, m ga-etinye ọhụrụ pedals na ekele maka anya na-amasị ma na-edebanye aha, ọ bụrụ na ị masịrị ya yeahnot dislike please and jam more close ups m ga-enwe a zuru nyochaa n'oge na-adịghị m na-eche na ndị ọzọ e ngwaahịa na-eme na igwe kwụ otu ebe oke n nwere, dika okpu agha na ihe, nyocha ndị a ga-apụta na ọwa a n'oge na-adịghị anya
Ego ole ka ibu TCX dị arọ?
Arọ: 8.41kg (18.54 lb) dị ka a nwalere (nha ML, nke nwere pedal na cages); 850 g (1.87 lb, etiti naanị, na ngwaike); 400 g (0.88 lb, ndụdụ naanị, na-egbughị). Highs: Ngwa ngwa na ngwa ngwa, ịdị arọ dị mfe, ezigbo uru. Lows: Enweghi nkasi obi, uzo di na gravel category mana enweghi nke obula.Jenụwarị 27. 2021
Kedu ihe dị iche na igwe igwe gravel na igwe cyclocross?
Onye isi ụlọ akwụkwọọdịiche dị n'etitikaokirikiri igwe kwụ otu ebena aajịrịja nkume bụachọtaran'imegeometries ha. Aokirikiri igwe kwụ otu ebega - enwe obere usoro ogologo na obere mkpịsị elu, ha abụọ na - agbakọta maka ịnya ịnya ịnyịnya ọgụ na njikwa ihe ngwangwa karịagravel igwe kwụ otu ebe.
(egwu siri ike) - Bịa na enyi, bia - Guh. Ugbo ala a bu ahihia mbu nke mbu. N'ezie, ọ mara mma ile anya na ọ bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe na-abụghị ụzọ.
Ma n’oge ahụ, ha nwere naanị taya 25 milimita na obosara na brek brek. Ngwakọta ahụ abaghị uru nke na agbụrụ cyclocross dị ihe dị ka pasent 40. Otú ọ dị, ugbu a, dị ka ị pụrụ ịhụ, isi nri agbanweela.
Anyị nwere taya ndị sara mbara ma na-atọ ụtọ karịa ịnyịnya n'okporo ụzọ iji nye gị njikwa na nkasi obi ọzọ. Also nwekwara a dịtụ elu ala mgbodo nke mere na i nwere ihe pedal nnwere onwe anya-ụzọ. Na njikwa ahụ dịtụ ntakịrị.
Enwere m ọtụtụ njikwa karịa mgbe ọ na-amị amị ma ọ bụ na - enweghị ntụ - Ma ugbua enwere igwe ọhụụ na obodo - Ollie, a na m ewepu nkeji abụọ, nwunye - Oh ee, ọma, otu obodo. M pụtara ọhịa na ugwu. Mana ee, lee igwe eji ajị anụ.
Nke ahụ nwere wider, ọzọ grippy taya. Geometry na-eme ka igwe kwụ otu ebe na-atọkwu ụtọ ma na-echekwa ịnya ịnyịnya na ọnọdụ rụrụ arụ. Enwekwu nkasi obi na etiti karịa ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ, ma ọ bụ ekele maka akụkụ ndị tụrụ ya na ya ma ọ bụ etiti ya.
Ibu buru ibu, njikwa arụsi ọrụ ike, nkasi obi karịa. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe igwe kwụ otu ebe m kwere nkwa. - Eeh.
Oh, ee, echere m na ị nwere ike ịnọ na-eche ihe bụ ihe dị iche na etiti gravel na igwe kwụ otu ebe - ị nwere ike. Ọ dabara nke ọma, ebe ọ bụ na Canyon emeela ka anyị nwee ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụrụ na gravel ọhụrụ gravel si Gral, anyị nọ n'ọnọdụ zuru oke iji banye n'ime ajụjụ ahụ otu oge wee bịa azịza nye ajụjụ ahụ. Otu ajụjụ dị ezigbo mkpa nye ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịtụle ịzụrụ igwe kwụ otu ebe ọzọ.
N'ihi na onye? N't gaghị achọ ọchị, ntụgharị, na nkasi obi gị igwe kwụ otu ebe ọzọ? - Gwa m ihe, nke a ga-abụ ihe siri ike? Inwe ndị ahụ ọhụụ gravel mara mma na igwe kwụ otu ebe na ala kachasị mma na ugwu gravel - You na-ekwu nke ahụ, Ollie, mana nke ahụ nwere ike ịbụ ihe siri ike n'ihi na ị naghị agafe n'okporo ụzọ ọtụtụ, nri? - Ee, um, m dị mma na-acha akwụkwọ ndụ na-apụ. Ihe m na-ekwu, enwere m, ọ dịghị mgbe m mere ya. Ikwu eziokwu.
Mana echere m na nke ahụ pụtara na m nwere ike ịnye ọhụụ ọhụrụ. Enwere ọtụtụ n'ime gị ma eleghị anya ọ dịbeghị mgbe ị na-achụpụ n'okporo ụzọ ọtụtụ. Street Veteran - Enweghị m mmasị na okwu Veteran Ollie.
Daalụ nke ukwuu. Enwere m obere mmetụta banyere nke ahụ - dịkwa mma. Anyi aga agba ịnyịnya igwe mgbe ahụ, papa? (Ollie na-achị ọchị) (egwu siri ike?)) - Tupu anyị abanye na esemokwu anụ ahụ, ka anyị buru ụzọ hụ ma anyị nwere ike ịnwe ihe dị iche.
Ya mere, anyị na-echepụta ịdọ aka ná ntị ịgba ọsọ ọhụrụ - (Olu Na-ada ụda) Ajịrịja Cross- Ollie, ọ bụ obere oge nwere ụfọdụ okporo ụzọ, ụfọdụ ngalaba gravel, ụfọdụ akụkụ apịtị, obere oge na-agba ọsọ, 2 laps with a bike change after the first Laapị na gọọmentị anyị n'otu mpaghara olulu - you dịla njikere? - Echere m na m dị njikere enyi, ee. - M na-agụta gị ala. - Ọ dị mma - atọ, abụọ, otu, gawa. (egwu siri ike) M ga-enye Cy oge ụfọdụ ma nyere ya aka ịgbanwe igwe kwụ otu ebe na mpaghara olulu a na achịcha ehi a.
Njọ, akụkụ adịghị mma. Nkeji anọ, 40 maka agba nke mbụ. Ya mere, anyị ga-ahụ ihe ọ na-eme na gravel bike.
Ọ dị obere oseose, ọ bụghị ya? Echere m na ọ bụ ngwa ngwa.- (oké ada ada ụda) Kieskreuz.- Ọ nwere ọdịnihu.
Nke ahụ dị njọ - (ọchị) Ee, anyị ga-ahụ. Nkeji anọ, 40 na agba nke mbụ. Nkeji anọ, 20 na agba nke abụọ, nkeji anọ, 22 na nke abụọ.- Mmasị.- were nọ ọsọsọ ebe ahụ- Anaghị m eju m anya dịka m na-ahụ.
Taya niile, ịnyịnya ígwè, gịnị bụ ihe dị iche nde asaa? nke ukwuu ngwa na wider taya. The igwe kwụ otu ebe na-adị nnọọ iche, dị ka ma ọ bụrụ na ọ na-eche ihe kwesịrị ekwesị maka ụdị ịnya, n'ihi na ọ bụ otú ahụ nkume. M na-ekwu na ọ bụghị a cross N'ezie.
Obu obe gravel. Mana, ee, lee ihe ị chere. Aga m ahụ otu ihe ahụ, n'ezie, akwụsịrị m anya na ọ masịrị m gravel gravel.
M pụtara na gravel teren a, n'ụzọ dị irè. Ajuru anya, gravel igwe kwụ otu ebe n'ezie na-eche a bit mma. - The ezi ihe bụ na m na-ekwe nkwa dịkarịa ala nke abụọ ebe. - Onye mmeri.
Odo enyi, ka anyi gawa. Njikere, gaba. (Egwu energetic) Ngwanu, Ollie! Jidere na walked jere ije na ebe a na-egwu mmiri (mkpọtụ mkpọtụ) - Lee egwuregwu nzuzu - echere m na ị bụ onye na-agba ọsọ! - (ọchị) (Censor beeps) - jisie, jisie ike, bịakwa na enyi, ị nwetara nke ahụ - Gaa, gawa, gawa, gawa! (sọọsọ) Naanị wụkwasị otu enyi ahụ.
Nke a bụ gravel igwe kwụ otu ebe. Jisie ike. Gaba! Gaba! Gaba! - Wooh! Oo chi m akpọọ m ọkụ! - Gaa, enyi, bia! Gwuo! - Ehe! - Oh, m mere ya! - Ehe! (Mkpọpụta mkpọtụ) Gah! Guh! - Enweghị m ike ịkwụsị ịchị ọchị.
Kedu akụkọ ifo, ee. Bia, di. - Gịnị mere, m ofufe! - Bịa, gawa, gawa! Ọganihu! Ọ gbara ntutu naanị otu nkeji.
Ma eleghị anya, anyị maara ihe Mathieu Van der Poel amaghị - Ọfọn, ọ bụghị ngwa ngwa. Ma eleghị anya, ọ bụrụ na Van der Poel ga-agba ịnyịnya cyclocross na gravel na Daylamites .Ọ megidere oke apịtị na Northern Europe.
Ma ọbụna n'oge ahụ, ọ gaghị adị mfe. Obosara Taya iji malite. M na-ekwu, nke bụ eziokwu bụ na gravel cross bụ gravel karịa obe.
Yabụ, iji ghọta ọdịiche dị n'etiti abụọ ndị a, anyị ga-elele usoro ahụ. N’akụkọ ihe mere eme, e kere ọgba ịnyịnya si na cyclocross igwe kwụ otu ebe. Yabụ, dị ka anyị ga-ahụ, enwere ọtụtụ DNA dị n'etiti abụọ.
Ma ugbu a, ọnụ ụzọ ka meghere maka ndị mmadụ ịkepụta ịnyịnya ígwè cyclocross nke ga-agbagha ọzọ. Na inflite a bụ otu n’ime ha. N'ihi ya, a rụrụ ya gburugburu ebe a na-ahụkarị gburugburu ebe obibi cyclocross nke na-adịkarị ahịhịa ma ọ bụ apịtị, ahịhịa dị uzuzu uzuzu, yana ọtụtụ ntụgharị siri ike.
I nwekwara ike ikwu na igwe kwụ otu ebe a nwere obere taya karịa nke gravel bike. Nke ahụ bụ n'ihi na UCI na-ekwupụta obosara taya kachasị nke 33 millimeters. na ọtụtụ nnwere onwe pụọ apịtị.
N'ezie, a na-echekwa ahịhịa ahụ iji gbochie apịtị. Mita 40 nke obosara ga-esi ike. N'ezie na azụ.
Anyị gaara enyocha, belụsọ na nke a na-agba rotor 140 mil n'azụ. Kedu nke bụ 160. Ma ọbụna ebe a ọ kwesịrị ekwesị maka nzube ya.
Gaghị ewere Epic Downhill Cycles Na A Cyclocross Race Mgbe m laghachitere ụlọ oriri na ọ hotelụ withụ na nke a, achọpụtara m na ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ nwere ike ịpụ ngwa ngwa ngwa ngwa. Ntughari zuru oke maka nkuzi cyclocross. Ma ọ bụchaghị maka epic ụzọ ịnyịnya.
Anyị anyịnya igwe abụọ anya dị nnọọ iche. Na, ọtụtụ nke ahụ gbadara na tube ahụ dị n'elu. Rarely naghị ahụkarị ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ na geometry, na nke ahụ bụ n'ihi na ịchọrọ oghere dị ka o kwere mee na triangle ihu mgbe ị chọrọ iburu ya ma tinye ya n'ubu gị. dị ka m, n'ihi na n'ezie etiti ga-abụ nnukwu.
Mana mgbe m kuziri Emma otu esi agba ịnyịnya cyclocross, anyị enweghị ike ịchọpụta etu anyị ga-esi jiri ogwe aka ya gafere n'ihi na ọ ga-adị oke nkenke maka ogo ya, agbanyeghị na nke a bụ eziokwu na ọ na-akwụ ụgwọ karịa oghere iji weta ogwe aka gị na ubu gị. Ma ihe mere o ji daa ebe a bụ naanị n'ihi na a na-ekpughere oche oche ntakịrị karịa iji nweta ọtụtụ nnabata site na azụ igwe kwụ otu ebe; ị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ọ nọghị ebe ahụ, nke ahụ bụ oche mara mma mara mma. Ma ọ ga-adị ntakịrị stiif.
Ugbu a, n'ikpeazụ, jiometrị nke igwe kwụ otu ebe. Ọ bụ n'ezie mara mma yiri. Ogologo ogologo ogologo ogologo yiri nke ahụ, akụkụ nke ọkpọkọ oche na ọkpọ isi ahụ dị mma.
Ihe dị iche, nke nwere ike ọ gaghị ada ụda, bụ elu nkwado dị elu. Ya mere n'ụzọ dị irè ole ala ala mgbodo axle jiri ya tụnyere wiil axle. Na nke a, ọ dị milimita 11 elu na igwe kwụ otu ebe na-anọdụ ala karịa.
Ọ na-adị ka ọ ga-adịchaghị mma mgbe ị na-aga ngwa ngwa. Ọ na-enye gị ọtụtụ ihe ọzọ pedaling nnwere onwe ka i nwere ike na-pedaling n'okporo ụzọ. Na nwute, dịka onye ọ bụla n'ime unu na-agba ọsọ cyclocross ga-ama na ọ ga-agbacha ọsọ oge niile na ịgba ọsọ cyclocross.
Ma ọ bụrụ na ị na-ele anyị leanometer ma ọ bụ anyị leanometer, ọ bụ ihe na-akpali mmasị na, n'agbanyeghị dị iche iche ala mgbodo elu, ma anyịnya igwe n'ezie nwere a yiri pedal nwechapụ, n'ihi na wider na taya na-elu na Grail. Yabụ, n'eziokwu, brackets ala yiri nnọọ ala na ala. Ma ọ na-emetụta ndị na-akwọ ụgbọala ahụmahụ a otutu ihe. - N’ụzọ dị iche, gravel anaghị adịkarị ọcha.
Ọ bụ maka nkasi obi, nnukwu kilomita, ntụgharị na njem. Ya mere, ha nwere ọrụ ole na ole, n'ihi ya, ha nwere taya buru ibu karịa UCI Ga-enye gị iwu ka ị gbaa ọsọ. Nwekwara ọga ebe niile na mgbakwunye isi chọọ ụwa gị niile mma.
Na ọtụtụ ndozi ọrụ na-ike n'ime eku. Anyị nwere Canyon gbawara n'etiti oche post ebe a, nke nwere ike ịmịgharị ma nyekwuo nkasi obi n'azụ m ga-ekwurịrị banyere hover mmanya. Ya mere, ihe mkpuchi ahụ na-ele gị anya.
Ma mgbe ị na-anya ya, ị naghị ahụ ihe ọ dị ka ya. Ọ na-adị ya mma mara mma maka Canyon, ọ dị okpukpu asaa karịa ike karịa inflite si H31 kokpiiti. Ebe ọ bụ na ị ga-ahụ ọtụtụ ebe dị iche iche karịa ka ị ga-ahụ na igwe kwụ otu ebe, ị ga-enwe ike ịzọ ụkwụ na ma kilomita iri ise na ise kwa elekere, na nke a, iji nyere m aka inwe ọtụtụ ụzọ ọmụmụ.A m nwetara 50/11 na mgbe ahụ 34/34.
Abụkarị crossbikes nwere warara warara na ndị na-cross agbụrụ agbụrụ na-adịghị achọ nlezianya UCI iwu. Ka anyi che ya iru, adi m anya ịga UCI ihe. Ewoo! - Emere m ya! - Kedu egwuregwu nzuzu bụkwa nke zuru oke maka gravel ịnyịnya na njem ịnyịnya ibu.
N'ihi na anaghị m eme ihe n'okporo ụzọ ma enweghị m nzuzu ọ bụla na zed. Ikpọ taya buru ibu na ogwe aka ogwe aka ya na ihe ndetu ala na nkwado dị elu n'ime etiti ahụ na-agbakwunye n'eziokwu na enwere m obi ike karị mgbe m na-agba ịnyịnya ígwè. Karịsịa n'okporo ụzọ.
Ma nke ahụ dị m ezigbo mma. Cross bike vesos na gravel bike N'ihi ya, gịnị bụ nnukwu ihe dị iche? Ihu ọma, nke a bụ nhọrọ dịgasị iche iche. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ igwe na-agba ọsọ na-agba ọsọ - Kedu maka igwe kwụ otu ebe, Ollie? Ha! Mba, echere m na ị bụ eziokwu.
Ma ọdịiche ndị ahụ ka dịtụ aghụghọ, ọ́ bụghị ya? The sara mbara taya na-eme ka a nnukwu, nnukwu ihe dị iche. Obere ihe nkwado dị ogologo toro ogologo na-agbanwe agwa ahụ nke ukwuu. Yabụ ọ bụrụ na ị naghị achụpụ ha n’azụ nke ọzọ, ị nwere ike ọ gaghị ahụrịrị nghọta ndị a dị ka ị nọ n’ọnọdụ ahụ dị oke mma nke anyị nọ taa.
Ọ dị ịrịba ama ihe odide ndị na-enwupụta, ọ bụghị ya? - Ee, ọ bụ n’ezie. Ugbu a, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ka epic na-apụ n'okporo ụzọ na-enweghị ihe ọ bụla na zed, lelee Cy's ugwu ugwu dị ịtụnanya na ihe atụ njem gravel na Iceland. Pịa ebe a n'okpuru - Ee, biko nye onye a mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị.
Ndi Giant na-eme igwe eji ajuruja?
NaNnukwuNnupụisi bụ ikagravel igwe kwụ otu ebe. Ọ dị na ụdị alloy na carbon dị iche iche nke enyere gị ma ọ bụrụ na ịchọrọirua Inupụrụ onwe gị isi. Modeldị ọ bụla dị na nso a na-enweta kit site naNnukwuna e mepụtara na-enye a bit nke nnabata maka a smoother ride.15.10.2020
Adịghị mkpa a gravel igwe kwụ otu ebe gravel. Ndị mmadụ na-etekarị igwe kwụ otu ebe na unyi. Ma ọ bụrụ na ị na-agba ọtụtụ gravel ma ọ bụ na ị chọrọ ịgafe gravel ọzọ, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ịnweta ụgbọ ịnyịnya n'okporo ụzọ gị ka i wee nwee ahụ iru ala ma nwekwuo obi ụtọ ịhapụ Tarmac.
Otú ọ dị, ihe dị oké mkpa bụ na ị nwere ike ịtụgharị ya ka ọ gbaa ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na enweghị mmerụ na-adịgide adịgide. (Rock Rock) Ego mbụ ị kwesịrị ịtụle bụ na taya sara mbara. Ọchịchị isi mkpịsị aka bụ dabara kasị widest taya na ị nwere ike n'enweghị ihe dabara n'ime gị eku na ebe e wusiri ike.
N'ezie, ị nwere ike ịnya ụgbọ ala gravel na taya 23 mil n'obosara, mana ọ ga-abụrịrị na ị ga-atụ ya ya ka o wee sie ike iwelata ihe egwu nke mmebi, na n'oge ahụ ị ga-eji nwayọ nwayọ na ọtụtụ erughị ala. Yabụ, na igwe kwụ otu ebe mgbe niile ị nwere ike ị ga-enwe ike ịgagharị dị ka afanyekwa na taya 28 nke obosara nke zuru oke zuru oke iji jikwa igwe eletriki ugba mmiri mara mma nke nwere ike ịnwe 32, wee bụrụzie n'ezie na egwuregwu. Agbanyeghị, iji tinye ya na gburugburu ya, na igwe eji ajị anụ na-apụ apụ, ị nwere ike dabara ịnyịnya ígwè 40-inch, ikekwe ọbụlagodi taya 45-millimeta na ya.
Na nke a, nke bụ ezigbo ịgba ịnyịnya ígwè, m na-enwe ikpochapụ anụ ọhịa. Ya mere, m ga - ahụ ma ọ bụrụ na m ga - eme ka ọ buru ibu. (Rock music) Na-esote anyị ga-anwa ichedo anyịnya igwe dị ka o kwere mee, n'ihi na gravel pụtara nkume.
Na nke ahụ zuru oke maka oge ịgba egwu n'ihi na, ma e wezụga mmetụta na mmetụta nke oke okwute, bump ahụ ga-apụtakwa na ị ga-enweta ọtụtụ mgbatị. Ya mere, nke a na-echebe carbon dị nro n'ebe ahụ ma na-eme dị ka ego nye ndị enyi, ịkwụsị ma ọ bụ mechie mkpọtụ ahụ. Mgbe ahụ ị ga - enweta teepu doro anya na mgbakwunye na akwa ojii ahụ, na m ga - eji nke ahụ na - agbada na tube iji chebe mpempe nkume site na wiilị ihu.
Ma n'ezie n'ime oche gị na-anọ ebe a na azụ oche oche. M tinyere na Terrain mgbe niile na-ekwu na nsọtụ nke m cranks na-n'ezie akwụkwọ ji agwụ site na nkume, na otú i nwere ike n'ezie itinye ego ụfọdụ roba na bumpers na-aga na nsọtụ. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ idobe ha n'ọnọdụ mara mma, nke ahụ nwekwara ike ịbụ ezigbo aha.
Ọzọ anyị na-ekwu maka ọnụọgụ gia. Ebe ọ bụ na ịkwọ ụgbọala na gravel siri ike karịa, ọ na-adị nwayọ nwayọ, n'ihi ya ị nwere ike iji obere akara aka gafere. Ke ofụri ofụri, ndị kasị, mfe, na dị ọnụ ala bụ gbanwee gị n'azụ katrij n'ihi na a ibu.
lactobacillus gasseri ọnwụ dị arọ
Ma, ị ga-akpachara anya n’ihi na ndị na-agbara gị azụ ga-eme ka ị ghara ịha nha kaseti. Na nke a na Dura Ace azụ triangle ailleur, enwere m ike itinye 11 ruo 30 ebe ahụ. Ọtụtụ mgbe iji ogologo Shimano onu derailleurs ma ọ bụ n'ezie nnukwu onu, ị nwere ike nweta 11 ka 32, ma eleghị anya ọbụna 11 ka 36 n'ebe ahụ.
Mana enwere obere ihe dị nkenke Wolf Tooth na-ere akụrụngwa a na-akpọ njikọ ụzọ. Na nke ahụ na-agbatịkwu ihe nkwụsị gị ka ị nwee ike ịnya casset 11 ruo 40 nke dị oke. Ihe ọzọ ị nwere ike ime bụ ịgbanwe agbụ gị n'ihu.
Ma enweelarị m kọmpat kọmpat na ya, ya mere 5034 ogologo ogologo. Yabụ enweghị m ike ịnweta mgbanaka dị ntakịrị karịa belụsọ ma m gbanwee ihe niile ahụ maka nnukwu kọmpat. Mana ọ bụrụ na m mere ọtụtụ gravel, nke ahụ nwere ike ịbụ ego m chọrọ itinye.
esi akpọchi igwe kwụ otu ebe gị
Bikzọ igwe kwụ otu ebe siri ike, mana otu mpaghara ị nwere ike ịhụ nsogbu dị oke ọnụ dị na ya bụ wiil gị. Ọ bụghị n’ihi na ha esighi ike, naanị maka na mgbe ị na-akwọ ụgbọala na gravel ị yikarịrị ka ị ga-akụ nnukwu ma ọ bụ nnukwu okwute, hapụ gị taya dara ada na ihe ga-ekwe omume na rim. Site na wiilị alloy, enwere ike idozi ya ma ọ bụrụ na ọ dịghị njọ.
Ma na igwe kwụ otu ebe, nke ahụ nwere ike ịnwụ. Ọ bụghị n'ihi na igwe kwụ otu ebe adịghị ike, naanị n'ihi ihe nke carbon carbon. Ka o sina dị, ọ dị mma.
Yabụ ọ bụrụ na inwere ego, ebum n'uche gị bụ itinye ego na wiilị dị oke ọnụ. Ọbụghị dịka m kwuru maka na ha siri ike karịa, mana ọ bụ naanị n’ihi na ịgaghị echegbu onwe gị banyere okwute ọ bụla ga - adị n’iru gị. Dị ka ego a gbakwunyere, ị nwere ike ịhapụ wiil nke abụọ ahụ na taya gravel gị na abụba cassette gị, nke pụtara na ụzọ ọzọ gị nwere ike ịhapụ ụzọ taya gị na cassette ụzọ gị.
Yabụ, ị nwere ike ịgbanwe n'etiti igwe gravel n'okporo ụzọ gị na igwe kwụ n'okporo ụzọ gị site na ịpịgharị wiilị gị, enweghị afọ ojuju, enweghị nsogbu. (Jazz music) Ngbanwe ikpeazụ anyị bụ iji akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe. Maka ebumnuche dị mfe na ị nwere ike iwepụ akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe wee pụọ n'ihi na ha agakwaghị na gravel, ugbu a ị gaghị apụ ma jee ije, mana ị nwere ike ọbụlagodi na ọ bụ naanị maka selfie.
Ọ bụrụ n’ịzọ ụkwụ na gravel na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ carbon gị, ị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa na ha na-akụ ọkọ. Ya mere, akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe bụ ego. Ọ ga - akara m mma itinye oge na ịnyịnya wee jiri ụkwụ na - agba ịnyịnya ụkwụ karịa ugwu ụkwụ igwe kwụ otu ebe, mana ọ bụrụ na ị na - eji akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe, ị gaghị enwe ike ịga n’akụkụ okporo ụzọ, yabụ na ịchọrọ ugwu ụkwụ igwe kwụ otu ebe.
Ma enwere ego, ha nwere akụkụ abụọ nke na-eme ka ọ dị mfe ịbido. Ọfọn, enwere igwe ịgba ọsọ m gbanwetụrụ. Taya sara mbara, wiil dị iche iche, agbanwere m pedal ma gbanwee akpụkpọ ụkwụ m.
Enwere m ihe ndị ọzọ n'ebe ahụ ma ejiri m teepu na-echebe ya dị ka o kwere mee. Naanị mgbanwe a hapụrụ m. Dị ka Kelly Fritz kwuru n'otu oge dịka onye nta akụkọ bara uru, akpa akwa bụ ọnọdụ uche.
Echere m na akpa eriri bụ, ọ bụghị naanị na ọ dị njikere maka gravel, m na-ewu ewu. Nanị ihe m chọrọ bụ afụ ọnụ. Mana enwere m ike ichere ndụ m maka otu n'ime ndị a na GCN.
Ọ kwesịrị m zụta ịnyịnya ígwè ma ọ bụ igwe gravel?
Isi ihe dị iche n'etiti aokirikiri igwe kwụ otu ebena agravel igwe kwụ otu ebedị na geometry dị iche iche ha. Aokirikiri igwe kwụ otu ebega - enwe obere usoro ogologo na obere mkpịsị elu, ha abụọ na - agbakọta maka ịnya ịnya ịnyịnya ọgụ na njikwa ihe ngwangwa karịagravel igwe kwụ otu ebe.
Nwere ike ịnyịnya igwe eji igwe ajị agba agba?
Ajịrịja nkume awara awara-agbanwee iji aigwe kwụ otu ebedrivetrain (dịka ọmụmaatụ, SRAM AXS na-enye ohere maka ntọala 'mullet' site na iji 10-50tugwukaseti). Ma ọtụtụugwu igwe kwụ otu ebeenweghị ezughị oke iji kwado usoro buru ibu nkegravel igwe kwụ otu ebedrivetrains na top-ọgwụgwụ ọsọ ga-ejedebe mgbe na-atụlegravel anyịnya igwe.02/18/2020
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eji nwayọ karịa igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụghị ekelejiri nwayọ karịakaokporo ụzọn'ogologo, ma dị mma na ọtụtụ.10.12.2014
Kedu nke bụ MTB ngwa ngwa ma ọ bụ igwe ajịrịja nkume?
Arụ ọrụ naososo
N’elu mmiri na-akwọ mụrụmụrụ, nke a na-ete n’elu ma ọ bụgravel, kagravel igwe kwụ otu ebega-ukwuuỌsọ ọsọma rụọ ọrụ nke ọma karịa aigwe kwụ otu ebe. Dịka e kwuru na mbụ, ogwe ndị dobe na-enye profaịlụ aerodynamic ọzọ, taya ndị dị warara nwere obere nguzogide na-agagharị, na ịdọ aka na ntị siri ike ka mma maka nnukwu ọsọ.02/18/2020
Ngwurugwu gravel dị mma maka ụzọ?
Ajịrịja nkume anyịnya igwedịukwuna nwayọọgbanyụọ-okporo ụzọteren, ma ha na-emebi onwe ha ka ndị dị ọchaokporo ụzọ anyịnya igwe. N'eziegravel anyịnya igwe, na ha Flex chainstays na nkwusioru ndụdụ, nwere ike ịbụ a ọtụtụ ihe na-agbaghara na-agba ịnyịnya na tarmac, karịa ntachi obiokporo ụzọetiti ma ọ bụ njegharịigwe kwụ otu ebe.06.15.2020
Ngwurugwu gravel dị nwayọ karịa ịnyịnya ụzọ?
Ndigravel anyịnya igwe iji nwayọọ karịaọduọanyịnya igwe? Azịza ya bụ: 'Ọ dabere. 'E nwere ihe ole na ole nwere ike ime agraveltayaJiri Nwayọọ: Aerodynamics nkeigwe kwụ otu ebe: Taya sara mbara na-ejide ntakịrị ikuku, mana mmụba 10 mm na mpaghara ihu anaghị eme nnukwu ọdịiche.Dec. 3 2019
Igwe igwe cyclocross ọ na - nwayọ nwayọ?
Yabụ na ị gaghị abụ nke ọ bụlaJiri Nwayọọn’elu obeigwe kwụ otu ebenwere ibu mpịachi taya. Also ga-enwe ike ịnya ogologo oge, n'ihi naigwe kwụ otu ebeagaghị eti gị ihe karịrị akarị na nkwarụ okporo ụzọ. Ugbu a ị na-ekwu okwu banyere ịnya na taya CX n'ezie, ọ bụ ezie na taya ga-agajiri nwayọgị ala. g.
Bụ ibu TCX Advanced Pro A ụzọ bike?
Mgbe a bịara na katalọgụ nke igwe kwụ otu ebe dị jụụ nke na-anaghị akụ akụ, enwere ọtụtụ ihe na-echere Giant karịa naanị igwe kwụ otu ebe. Mgbe afọ 5 gasịrị, Giant emelitere etiti ha kacha elu, nke TCX Advanced Pro. The TCX Advanced Pro na-enye fechaa, agbụrụ lekwasịrị anya ndozi.
Kedu ọnụahịa nke nnukwu TCX 2?
TCX 2 bụ nnukwu ịnyịnya ígwè cyclo-cross nke Giant na £ 750 ọ dị ka ihe nwere ọnụ ahịa. Na nlezianya nyochaa enwere nkwekọrịta ole na ole zoro na mpempe akwụkwọ, mana nke a na-enyekarị ndị nrụpụta ohere ị nweta ọtụtụ dollar na etiti.
Nnukwu TCX slr-1 ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Giant TCX SLR-1 cyclocross bike na-ejikwa ọmarịcha ma na-abịa na raft nke ezigbo ngwongwo, ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe na-eme ka ọ ghara ịbụ igwe na-agafe agafe ma e jiri ya tụnyere mgbalị yiri nke ndị ọzọ ụdị Giant TCX SLR 1 2019 -... Giant TCX SLR- 1 cyclocross bike bụ onye na-emepụta ihe eji emepụta ihe eji emepụta nke aluminom.